Misoro yeNhau, 01 Kukadzi 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Kukadzi 01, 2019
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, pamwe nemakurukota avo nenhengo dzeparamende, vanobatana neveruzhinji mukuchenesa nzvimbo dzavanogara pasi pechirongwa cheNational Clean Up Campaign icho chakatanga mwedzi mitatu yapfuura.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Ndira 30, 2019
Nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nemapurisa nemauto inotsviriridza muparamende pakati penhengo Zanu dzePF nedzeMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa, Zanu PF ichiti icharamba ichisunga vose vari kukonzeresa mhirizhonga.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Ndira 29, 2019
Mutungamiri weMDC. VaNelson Chamisa. Vari kukumbira nyika dzekunze kuti dzipindire munyaya yeZimbabwe zvichitevera kusungwa kuri kuramba kuchiita vanhu vanosanganisirawo nhengo dzebato ravo mushure mekuratidzira kwakaitika munyika masvondo maviri adarika.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Ndira 25, 2019.
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Ndira 24, 2019.
Vanhu vakawanda, kusanganisira muimbi ane mukurumbira, Thomas Mapfumo, nhengo yeZanu PF, Va Simba Mudarikwa pamwe nemutungamiri weMDC, VaNelson Chamisa, vanoungana kuNorton vachichema Oliver Mtukudzi, uyo akashaya nezuro mushure mekurwara nechirwere cheshuga kwenguva yakareba.
Misoro yeNhau, Muvhuro, Ndira 21, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Ndira 18, 2019.
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Ndira 17, 2019.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Ndira 16, 2019.
MIsoro YeNhau DzaNhasi Chipiri 15 Ndira 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Ndira 15, 2019. Hurumende inovhara masaisai epamadandemutande kuitira kuti vanhu vatadze kutumira pama WhatsApp mavhidhiyo nemapikicha ezviri kuitika muzuva repiri rekuratidzira .
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Ndira 11, 2019.